Imifanekiso engahleliwe kwifilimu yoopopayi engekhoyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izakhelo ezingahleliwe ezivela kwifilimu yoopopayi ekucingelwa ukuba iphefumlelwe ye Studio Ghibli
Los amalinge obugcisa anokuba kufanelekile kuthi njengendlela yokufunda ngaphandle kwesizathu esikhulu kunale. Enye yazo inokuba ithatha izakhelo ezininzi kumdlalo bhanyabhanya ophilayo ngaphandle kwenjongo ecacileyo, iyelenqe, okanye ukukhula komlinganiswa. Zonke ezo nkcukacha zihlala zinxulumene nokwenziwa kwefilimu emfutshane okanye imovie.
Olu luvo olwenziwe nguMathias Zamecki ngalo yenza imifanekiso eyahlukeneyo yesakhelo esingahleliwe ukusuka kumdlalo bhanyabhanya ophilayo ongekhoyo. Imibono eyahlukeneyo iyavela engqondweni yakhe kwaye uyayenza ngaphandle kokuzibuza ukuba abo bantu babini bume ngathi sisikhova phezu kwenduli bafuna ntoni okanye kuya kwenzeka ntoni kwelo qhawe lijongene nesigcawu sobukhulu obukhulu.
UZamecki ucebisa ngokuqinisekileyo Imiboniso eyenziwe ngobuchule obukhulu ukusisa kwiimeko ezahlukeneyo apho umntu anokuthatha ingcinga encinci kwaye enze isindululo esifanayo esinokwenzeka kwimihlaba ethile. Eli gcisa lisekwe kwiifilimu zoopopayi ze-Studio Ghibli, ezithi, ngendlela, izolo Isoftware yoopopayi yasimahla ye-OpenToonz ikhutshiwe.
Ngaphandle kwenjongo yokufuna imvelaphi, abalinganiswa kunye neemvakalelo, UZamecki wenza uvavanyo olukhulu ngokwalo olunokukhokelela ekubeni umbhali weskripthi afumane inkuthazo eyimfuneko yokwenza umsonto oqhelekileyo, ungquzulwano kunye nabalinganiswa abohlukeneyo abanokuthi badlale ebalini kwifilimu emfutshane okanye yoopopayi.
Indlela enomdla wokuzama kulo mculi oye wakwazi ukwenza uluhlu lwakhe lwemifanekiso yintsholongwane kwi-Intanethi kwaye sinokujonga iinkcukacha kunye nokufikelela facebook wakho ukufunda ngeeprojekthi zakhe ezizayo ezizayo kwaye ukuba uya kuba nakho na ukunika ubomi obungakumbi kwelo bali livele phambi kwethu kwaye apho abo bantu babini kunye nekati ejongene nesigcawu, angazinika ngakumbi ukwenza ibali lakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Izakhelo ezingahleliwe ezivela kwifilimu yoopopayi ekucingelwa ukuba iphefumlelwe ye Studio Ghibli
Uthanda uVincent, umboniso bhanyabhanya wokuqala opeyintwe ngokupheleleyo kwioyile
Ukwenza imifanekiso eqingqiweyo embindini wendalo